स्वास्थ्य पेज » बालबालिकामा डिप्रेसन भएको कसरी थाहा पाउने ? बालबालिकामा डिप्रेसन भएको कसरी थाहा पाउने ? – स्वास्थ्य पेज
बच्चालाई किन डिप्रेसनले गाँजिरहेको छ त रु यसका एकमात्र कारण छैन । वर्तमान अवस्थामा एकल पारिवारिक संरचनादेखि विद्यालयको व्यवहारले समेत उनीहरुलाई यस किसिमको जोखिममा पारिरहेका छन् । पढाईको बोझ, अभिभावकको अपेक्षा अदि कारण बच्चाहरुमा डिप्रेसन देखिएको बताइन्छ ।
बच्चालाई डिप्रेसन भएमा के गर्ने रु माथि उल्लेखित लक्षण देखिएमा के गर्ने रु यसका लागि अभिभावकले एकदमै सर्तक हुन जरुरी छ ।
यसको अर्थ हो बच्चाको उमेर, मनोविज्ञान अनुसार उनीहरुलाई बुझ्ने प्रयास । यस थेरापीमा बच्चा र आमाबुबाको सम्बन्ध कस्तो छ रु भन्ने कुराको जानकारी लिइन्छ । त्यसपछि उनीहरुबीचको समस्या के हो सो निक्र्योल गरिन्छ ।